Ukujongwa kwamaxesha-Iplagi yokufikelela kwimifanekiso yesatellite eneembali nge-AutoCAD-Geofumadas
Ukujongwa kwamaxesha-Iplagi yokufikelela kwimifanekiso yesatellite eneembali nge-AutoCAD
Epreli, 2019 AutoCAD-AutoDesk
Ixesha lokujonga i-plugin ekhangeleka kakhulu evumela ukuba kufumaneke ukufikelela kwimifanekiso ye-satellite ye-AutoCAD, ngemihla eyahlukeneyo kunye nezigqibo.
Ukuthatha imodeli yedijithali yendlela endiyenayo khutshelwa kwiGoogle Earth, ngoku ndifuna ukubona imifanekiso yembali yale ndawo.
1. Khetha indawo yomdla.
Inkqubo ilula. Ithebhu yokujonga ixesha ikhethiwe, emva koko kwi «Jonga umfanekiso» icon, ucofa kwindawo esembindini wendawo enomdla kuthi kwaye iphakamisa iphaneli ethi ejikeleze olo nxibelelaniso kukho imifanekiso ekhoyo enemihla yokubamba eyahlukileyo. :
1 zoom zoom 19, nge pixel ye-30 centimeters,
1 zoom zoom 18, nge pixel ye-60 centimeters,
I-7 17 imifanekiso yokukrazula, kunye ne pixel yeemitha ze-1.20,
I-7 16 imifanekiso yokukrazula, kunye ne pixel yeemitha ze-2.30,
I-7 15 imifanekiso yokukrazula, kunye ne pixel yeemitha ze-4.60,
kunye ne-7 zoom zoom 14, nge pixel ye-9.3a iimitha,
Xa ndikhetha isisombululo se-17, ngoko undibonisa imihla yale mizobo:
I-6 yazo ivela kwi-Airbus ngemihla kaJulayi, ngoNovemba noDisemba ka-2018, kwaye leyo yakutshanje iinyanga nje ezimbini ezedlule (16 kaFebhuwari 2019).
Kwakhona kubonisa ukuba kukho i-DigitalGlobe kaJulayi ukusuka kwi-2017.
2. Tyhila umfanekiso okhethiweyo.
Xa umfanekiso ukhethwe kwindlela yokujonga, sinokubona umfanekiso kwisisombululo esinikeziwe kunye nocwangco lwe-AutoCAD esiyisebenzisayo.
3. Yongeza ulandelelwano lwembali.
Ukucofa iqhosha "lokujonga ixesha" sinokukhetha ukulandelelana kwemifanekiso kwindawo enye ukwenza uthelekiso.
3. Fumana imifanekiso.
Isicelo sinomdla kakhulu, kuba sikuvumela ukuba ujonge imifanekiso ekhoyo yendawo kunye nokubanakho ukuyithenga kumboneleli. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba imifanekiso efumanekayo ayingombala, kodwa ulandelelwano lweemifanekiso zesatellite kunye nokuhlangana okuthile. Lo mfanekiso ulandelayo ubonakalisa ukungqubana phakathi kweZoom 19 zeefoto kunye nomfanekiso we-Zoom 14 ongasemva.
Inkonzo ayitholakali, kodwa iya kuba yindlela yokusebenza yokuqala I-Plex.Earth Plugin ye-AutoCAD.
Ngokubanzi, ndiyifumene inomdla kakhulu, kunye nezinto ezininzi ezinokubakho; kwelinye icala ukwazi ulwazi olukhoyo kwindawo ethile, yenza uthelekiso lweenguqu zembali. Eyona nto ilunge kakhulu, isebenza kwi-AutoCAD, nakwezinguqulelo zamva nje; Ngombono "wesoftware njengenkonzo" kuba ngaphandle kwesidingo sokuthenga umfanekiso, ungasebenzisa imifanekiso yesatellite ngokubhalisela inkonzo yePlex.Earth.
Ngokubhekiselele ekuphuculeni okuza kunceda umsebenzisi ukubonisa igridi yeebhokisi zezibonelelo ezikhoyo kwindawo echithwe kuyo, endaweni yokuhamba kwindawo ukuya kwindawo; njengoko unako ukubona ezinye iingxelo ezikhoyo kwiGoogle Earth.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Imigca ejikelezayo esuka kuGoogle Earth-ngamanyathelo ama-3
Post Next I-Supermap-isisombululo esibanzi se-2D kunye ne-3D GISOkulandelayo »